Tsy vitsy ireo voatery manao maloto eny rehetra eny antony miteraka fofona ratsy eny amin’izay toerana rehetra aleha ankoatra ny aretina entiny. Hisorohana izany dia nahazo toeram-pivoahana sy fidiovana vaovao ny fokontany Andraisoro, ao anatin’ny boriborintany fahadimy. Vokatry ny ezaky ny sefom-pokontany vaovao Rasolofomanana Rolland no angady nananana sy vy nahitana izany raha fikambanana tsotra kosa no mitantana ny fotodrafitrasa. Ny talata lasa teo no notokanana tamim-pomba ofisialy izany. Tsiahivina fa efa nahazo ivontoerana ho an’ny pôlisy ihany koa ny ao Andraisoro ka tsy nisy intsony ny vaky trano sy ny hala-botry hatreto.